Du'umti Haa du'u,
Kan ajjesee dhokse,
Ija goota keenyaa,
Buruqsee kan baqse.
Kan Baaroo Tumsaafaa,
olii addemaa kaalessaa,
kan addaan nu dhiise,
seenaatti nu hanbise.
kan dhokse Bilille,
Dacheetti gadi gatee,
Miidhaga ishee faalee,
kan geeraraa gale.
Du'umti haa du'u
kan Asteer Gannoofaa,
Kitaaba harkaa buusee,
Goota Hagaree Tulluu,
Isa haqaan bulu.
Inni Waaqoo Guutuu,
Maqsee gadii gatee,
Du'umt haa du'u'
Ofii qilee haa bu'u,
Awwaalee gadoo haa ba'u
Du'ee dhagaa haa baatu,
Boollisaa haa fagaatu.
Akka hhin deebine,
Rafee hin dammaqne,
Beekaa koo hin miine,
Bartootaa koo gadii hin ciree,
Goota koo hin gaagaane.
Barreeffamni kun qorannaan dubbii Arsi'ii yookaan koottu-dhufeen maal akka fakkaatu ibsa. Barreeffamni kun gabaabaa ta'ullee jechoota gamnaa yeroo adda addaa bakka adda addaatti jedhaman irratti xiyyeeffachuun; gamni maal waliin jedhe gaafii jedhuuf deebii kennuuf yaala.
Koottu-dhufeen aadaa haasawa Arsiiti; sirna mari'ii ka Arsiin bakka sirnaatti haasawu. Koottu dhufeen sirna haasawaa kan bakka cidhaa ykn du'aatitti haasawamu. Sirna haasawaa ka dubbiin bilchaataan ittiin dubbatamu. Arsiin jaarsummaa koottu-dhufeen yookaan ilaaliin haasaya.
Namni bakka sirnaa jiru jaarsas ta'ee ka'ima kan dubbachuuf murtii qabu kan sirni dubbachuu hin dhoorgine martuu koottu dhufee fudhatee haasayuu danda'a. Koottu dhufee fudhachuuf ijoo dubbii beekuu qabna yoo hin beeknee ta'e nama beekutti siqnee gurratti dubbii na barsiisi jenna. Jaarsonnillee yoo namni haarofti addabaabaayii dhufe dubbii barsiisaa jedhan. Namni haaroftis erga dubbii baree booda yaada ofii kenna.
Aadaa Arsii keessatti ka'imti ykn dargaggeessi jaarsa jala taa'ee dubbii bara. Aadaa bareedaa Arsiin oromoo gumaache keessaa sirni haasawa koottu-dhufee tokkoffa jechuu dandeenna. Gara biraatiin sirni haasawaa kan gosoota oromoo biroo koottu-dhufee irraa garaa gartii guddaa hin qabu. Sirna haasawa koottu-dhufee keessatti gaafiin ykn yaanni kallattii adda addaatii ka'ee deebiin kallattii adda addaatii itti kennama. Koottu-dhufee dabaree eeggatanii namatti fudhatan koottaa kaa jedhan; namni hunduu dabaree eeggatee maarree abbaa ebaluu jedhee haasaya jalqaba. Namoonni adda addaa akkuma dandeettii fi muxannoo isaaniitti haasawa ofii fakkeenna dubbiitii fi maammaakaan gabbisanii dhiyeessu; kana booda yaada waliigalaa irra gayama. Dhimmi haasawamuufis erga hayyoonni adda addaa yaada ofii itti kennanii booda walii galteerra gayama.
Hayyuu dubbii beeku; namoota walitti bu'an kan araarsu; ka dubbii qoru; koottu-dhufee fudhatee haasawa bilchaataa haasawuu ka danda'u. Gabaabamatti; haasawa mishaa fakkeenna dubbiitiin midhaage haasawuun ka nama amansiisu jechuu dandeenna.
"Malkataafis; qandhafaafis toltii adurreetti bilbila haa hiinuu" jedhe hantuunni.
Qorata malee taa'e;
(Diintichi ka hobbaafateef waan loon irraa oofataniif/yaafataniif; gamni ammo iddoo taa'ullee qoratee taa'a; qoratee haasaya;qoraan hojjata)
"Dullumti eessaan dhufti?" jennaan; "Dugdaa fi jilbaan" jedhe gamni tokko. "Kana qofaa miti" jedhe gamni duraa:"Ijaan- harka ijarra kaayatee laalaa; gurraan- yoo waa itti himan yeey maal jettan jedhaa; ilkaanin- ilkaan irraa cabuu jalqabaa; qalbiin dhufti waa dagataa." jedhee deebise gamnichi duraa.
Koloobni maqaa itti haa baasu" jette namittiin.
"Gootni ka maal godhee dabeessi ka maal ta'e" jedhee gamni tokko kan biraa gafate. Gamni biraas; "Gootni ka ari'ee dabeessi kan dheesse" jedhe. "Kanuma qofaa ree jedhe gamni duraa?"; "Ee kanuma" Jedhe gamni lammataa. Jennaan miti jedhe gamni duraa "Kan dheessee deebi'ee ofirraa reebellee goota; kan ari'ee irraa hin hafnellee luynaa mitii?" jedhee gamnichi duraa deebise.
Akkam oolte" jedheen. Isiinis gamna waan taatef akkana jettee qaanessite:-
Ee ooltee" jetteen.
"Dhiisuuf dhalee; arraabuuf qoree malli maali?" jette dhaddeen dhaltee.
"Awliyaa rakko'oo dhaqan shantu du'a oolan shantamatu du'a" malli maali?
Hin ta'u jenna harree ganne
(Kaamaya mana urgaa/bareedaa; boosaya mana busha'aa; kaamaya harka hallee boosaya garaa halle/baay'ee deetti)
Ilmi qe'ee hatu raaja; niitiin dhiirsa hamattu raaja; namni lammii ganu raajaa; jaarsi sigabaa galu raaja.
Dullumti ihii(ebelee) dabalatte waan falli hin baafne; deegni ceem'aa dabalate waan falli hin baafne.
Gamni gamnaan akkana jedhe;" Dhiira tahanii meeshaa waraanaa dhabuun fafa." Jennaan; dogongorte jedheen gamni lammataa; "Meeshaa waraanaa dhabuu mitii meeshaa waraanaa qabaatanii onnee dhabutuuyyi fafaa" jedheen.
Gamni gamnatti dhufee akkana jedhe " Wonti erga deemee hin dhaabbatin maali? Wonti erga taa'ee hin socho'in maali? Wonti erga diigamee hin ijaaramin maali?" Jennaan gamni lammataallee akkas jedhee deebise. "Wonti erga deemee hin dhaabbatin laga; wonti erga taa'ee hin deemin dhagaa; wonti erga diigamee hin ijaaramin garaa:- garaa har'as borus ittuma nyaatanii inni sanuma"
Gamni gamnatti bayee qore:" Walqixxeen (handhuurri) lafaa eessa" jedheen. Gamni lammataallee "Achuma bakka ati jirtu san" jedheen. Gamni duraallee "Akkamitti ta'a?" jennaan "Dhundhumaan safartee walitti laaluu dandeetta" jedheen.
Gamni gamnatti bayee akkana jedhe "Fardaa oliin boora kiyya; biyyaa oliin Fasasa tiyya; niitii oliin niitii tiyyya; "Jennaan; dogongorte jedheen gamni lammataa"Boorri kankee guulee dabe; biyyi tantee dheebisaan dabde; niitiin tantee kashalabboomtee dabde."Jedheen
Gamni akkas jedhe:- fardaan haga farada jedhan dhaqqabo hin jedhanii; dubartiin haga dubarti jedhan ibso hin jedhanii; loonin haga loon jedhan qabbaneesso hin jedhanii; du'aan haga du'a jedhan woffifte hin jedhanii jedhe.
Baddaaf gammoojjiin yeroo baay'ee wal tuffatan dubbiinis wal tuqan wal agibu waliinis morku.Yeroo sirnaa; cidha ta'inna du'aa jaarsolii ciccimoo gamna ta'an filatanii 'koottu-dhufee' walitti fudhatan. Jaarsoliin dubbii sirritti beekan dubbii mi'aayaa nama tuffachiifne haasawan.
Yeroo woyii gammoojii irraayyi baddaa fuudhaaf osoo deeman worri isaan irraa fuudhan illee baddaa worra dureessa ture. Jaarsi gamnaa (abbaan gosaa) ka koottu dhufee haa fudhatuuf qopheessan keessaa tokko akkana jedhe "Jarana maalif wol gattanii facaatanii deemtan worra eennuu akka deemaa jirru beettanii worra guddaa dhaqaa jirraa bar; mee dhaabadhaa hin mari'anna jedhe. Akkuma beettan baddaan dubbiif sirritti qophooftee nu eeddii. Kanaaf; teessumti akka qabaa akka itti teennu mari'anna; nyaannis akka qabaa akka itti nyaannu mari'anna dubbiinis akka qabdii akka itti dubbannu mari'anna." jedhe. Achumaan jaarsi lammataa maarree jedhanii attam taana maal jenna biyyana jedhe. Jaarsi biraa koottu dhufee erga fudhatee akkas jedhe maarree jarana ka jettan sadiinuu nu hin rakkisuu jedhe. Achumaa, jaarsi duraa attamitti jennaan jaarsi sadaffa akkas jedhe ka teennu bakka isaan qopheessan kan nyaannu waan isaan nuu kennan ka dubbannu kallattii dubbii isaanii laalleeti jedhe.
Yeroo woyii gamin baddaa gamna gammoojjiitti bayee akkas jedheen "Eessaa baate abboo?" Jennaan; gamnichi gammoojjii illee "Gammoojjii baye." jedheen. Achii gamnichi baddaa "Gadii keessaa baatee!" Jennaan; achumaan gamnichi gammoojjillee "Gadii keessallee oli jira olii keessallee gadi jira." jedheen.
Gamni gamnatti bayee gamna qore; gamni duraa gamna lammtaatin akkana jedhe" Ganni maalii gamni maal" Gamni lammataallee akkas jedhee deebise "Ganni ka fixeensayee gamni ka dubbii fixe" Jennaan; Gamni jalqabaa dogongorte jedheen "Birraan illee ima fixeensayaa; dubbii ammo bultu (turtu) dhumattii; yerootu fixaa kanaaf ;ganni ka quufsee ciciiphise gamni ammoo ka waan dhufu (ofduraa) beekee." jedheen.
Gamni gamnaan akkas jedhe "Namni ka du'eef ka jiru keessaa kamtu baay'inaan caala?" Jennaan gammi lammmataallee "Ka jiruu du'e wajjiin ka du'etu caala"jedheen.
Daamuu Ushuu gamni Arsii beekkamaan yeroo ta'e dubbiif ganda woyii dhaqee erga simatanii booda dubartiin woyii akkana jetteen"Daamuu Ushuu ka gurri Ambaa Diina gaye sun kanumaa?" jette gabaabbinna isaa laaltee; innillee baay'ee gabaabaa waan tureef. Achumaa; Daamuu Ushuullee jecha isii dhagayee akkana jedhe "Ol hin cinneen gafarsaa; gadi hin cinneen farraa teennaan teessuma gayee; dubbannaan higaa gayee mixiif na komattaa" jedheen.
Jaarsi gamni woyii yeroo ta'e Daamuu Ushuutiin akkana jedhe "Daamuu silaa ati gamna beekkamaa ambaa diinni beekee ilma sitti baye qabdaa?" jennaan innillee akkana jedhee deebise " Arse sadiin afaan qabee tiyya sadan afaan qabatte"jedhe. Ilmaan sadan uumate keessaa tokkichillee isatti waan hin bayiniif.
Gamni warra soddaa dhaqee erga waa nyaatee dhugee booda yeroon gannaa akkana jedhe soddaatiin "Da'iyya marqi keessan xinnaatee dabe; gubee dabe; mi'aayee dabe" jennaan Soddaatinis akkas jettee deebifteef "Xiqqeenni akka yeroo; gubaatin akka jarjaraa; mi'aan akka harkaa afuufadhaa keessaa fudhaa " jetteen.